Mpanara-maso finday COD tsara indrindra (Nôv. 2020) - Tsy maintsy vakiana - Accessories
5 Mpanara-maso finday COD tsara indrindra - Tsy maintsy vakiana
Call of duty dia iray amin'ireo lalao malaza eran'izao tontolo izao, ary nanjary mpitarika iray lehibe teo amin'ny isan'ny olona milalao. Natomboka tamin'ny taona 2003. Tamin'ny PC sy solosaina finday ihany no nilalaovana azy io, saingy taorian'ny fisian'ireo finday finday avo lenta dia nisy filana lehibe hita ho an'ny kinova finday. Satria ny finday avo lenta tsy misy kitendry feno ary tsy mora ny mampiasa ny efijery kely mikasika ny hetsika haingana raha milalao lalao toy ny antso adidy ianao.
Noho izany, nofidina ny mpanara-maso finday mba hahatonga ny traikefanao amin'ny finday avo lenta hahafinaritra kokoa sy hampiala voly ary ho feno. Controller portable amin'ny filalaovana lalao dia ahafahanao mifehy ny lalao amin'ny bokotra malefaka sy mora hitazomana. Manamora kokoa sy mahomby kokoa ny lalao.
Ny lisitra COD Mobile Controllers-Top 5 tsara indrindra
Angamba mitady mpamily lalao ianao hilalao Call of Duty. Noho izany, nieritreritra izahay fa hanome anao maso haingana amin'ny iray amin'ireo mpanamory finday tsara indrindra misy eny an-tsena amin'ny filalaovana COD amin'ny finday avo lenta.
Izy io dia iray amin'ireo mpanara-maso finday tsara indrindra misy amin'ny filalaovana antso an-tariby amin'ny finday finday avo lenta. Izy io dia mifanaraka amin'ny Android sy IOS ary miaraka amin'ny bokotra fanaraha-maso sarintany 12. Azonao atao ny miaina traikefa goavambe sy mahatsikaiky amin'ny fampiasana an'ity fitaovana ity amin'ny findainao finday amin'ny filalaovana CoD.
Fananganana kalitao tsara
Traikefa amin'ny lalao premium
Tsorakazo analogy tsara
Tsy misy mari-pamantarana bateria
GameSir G6 dia mpitantana finday tsy misy tariby sy irery amin'ny filalaovana lalao amin'ny finday finday avoakanao. Vaovao io eny an-tsena ary manana famaritana vaovao. Manampy anao hilalao izy io na dia mitazona ny fifehezana sy ny fanaraha-maso ny efijery aza.
Bokotra fanaraha-maso folo
Traikefa nahafinaritra lalao
Tsy manohana Android
3. 5 amin'ny 1 Controller finday
Ity mpanaraha-maso lalao finday ity dia manome anao tombony amin'ny fanapahana, fikendrena, fivezivezena ary hitifitra miaraka amin'ny fampiasana ny rantsantanana fanondroana hifehezana ireo bokotra. Ity mpanamory finday ity dia manafaka ny ankihiben-tànanao amin'ny olana amin'ny fanaraha-maso fanampiny.
Ho fanampin'izany, miaraka amina mpankafy fivoarana mandroso sy marani-tsaina ary bateria 400mAh namboarina izay mahasoa amin'ny fampidinana ny hafanan'ny finday avo lenta ary miampanga ny smartphone koa.
Fiampangana ny smartphone ary mampihena ny mari-pana ao aminy
Rafitra fanaraha-maso 5 amin'ny 1
Touchpads kely kely kokoa
Izy io dia mpandrindra lalao tsy misy tariby ary mifanaraka amin'ny headset Android, Windows, ary VR. Manome anao traikefa tsara amin'ny lalao izany. Izy io dia miaraka amin'ny batterie 20 ora, izay mahatonga azy io ho tonga lafatra amin'ny seha-pilalaovana lavitra.
Ny fifandraisana 2.4Ghz dia miantoka anao aotra lag, izay tsy mamela anao hamoy ny basy amin'ny lalao.
Tsy manohana iOS
EasySMX Grip mobile Controller dia manome anao mora amin'ny fikirakirana azy ary manolo ireo mpandrindra finday tariby sy be mpampiasa izay tsy mora raisina. Ity mpibaiko finday ity dia manome anao fihazonana fanampiny ary manampy trotraka amin'ny findainao.
Izy io koa dia ahitana mpankafy fampangatsiahana hiarovana ny findainao amin'ny hafanana be loatra.
Traikefa farany amin'ny lalao
Ohatrinona no ilaina amin'ny COD Mobile Controllers?
Na dia mahafinaritra aza ny filalaovana lalao amin'ny finday avo lenta ary afaka milalao ny lalao tianao indrindra ianao na aiza na aiza. Ny smartphone dia niova be tamin'ny tontolon'ny lalao. Tsy mila PC na solosaina finday intsony ny filalaovana tifitra sy lalao malaza hafa toa izany. Azonao atao ny misintona azy ireo ary milalao tsy miato.
Mifanohitra amin'izany, ny fametrahana lalao amin'ny telefaona finday dia mety hahasosotra kely noho ny antony roa. Ny voalohany dia ny efijery amin'ny finday avo lenta misy fetrany voafetra, ary faharoa, tsy afaka mampiasa ny fanaraha-maso amin'ny efijery mikasika ianao.
Mba hanoherana ny olana toy izany, ny mpanara-maso finday dia mety ho safidy tsara indrindra ho anao ho tia lalao. Raha mpankafy ny CoD ianao, dia ny filalaovana azy amin'ny findainao miaraka amina mpanara-maso finday no hanampy anao hiaina azy io amin'ny malefaka sy fientanam-po bebe kokoa. Ho fanampin'izany, ny finday maso dia mampitombo ny vintana handresy satria manamora ny mitsambikina, mandositra, mihetsika ary mitifitra.
Ny mpanera finday dia nanova ny lalao amin'ny finday. Ny lalao toy ny Call of Duty dia be loatra amin'ny lalao smartphone amin'ny alàlan'ny fampiasana mpanera finday. Ny efijery kely sy ny fifehezana ny efijery voafetra dia tsy handiso fanantenana anao intsony rehefa milalao.
Ny fampiasana Controller finday dia tsy vitan'ny hoe manampy anao hanatsara ny traikefa nahafinaritra sy mampiala voly anao, fa mampitombo ny vintana handresena amin'ny fampitomboana ny hafainganao amin'ny bokotra fifehezana milamina.
Antenainay fa nanampy anao ampy izahay hahazoanao ny fifehezana finday tsara indrindra ho an'ny COD amin'ny fanomezana anao fanadihadiana feno antsipirihany momba ny fifehezana finday ary ampidiro ireo vokatra roa tsara indrindra ato amin'ity lahatsoratra ity.
Ny haren'i Bret Michaels dia antenaina hahatratra 1 miliara dolara amin'ny taona 2022. (miaraka amin'ny zava-mitranga isan-taona)
Falling Frontier dia lalao mihetsika feno. Nahemotra hatramin'ny 2022 ny Rts for Falling Frontier!
maka maimaim-poana ny mozika avy ao amin'ny YouTube ny mp3
emulator android tsara indrindra ho an'ny Windows 8.1
miasa ve ny iTunes amin'ny Windows 10
ny fomba hahazoana volo maimaim-poana amin'ny roblox
jereo aho id hira